Lemaka Ambohibary sy Mandrosohasina Mirongatra ny hala-bary an-tanimbary
Fakana an-keriny teny Ivandry Tsy mbola hita popoka i Sabir Molou
Nahitana tranga fakana an-keriny indray teto an-drenivohitra ny sabotsy folakandro teo tokony ho tamin’ny 1 ora sy folo antoandro. Ny tale jeneralin’ny toeram-pivarotam-panafody “Pharmacie Principale” eny Ivandry no lasibatra.
Vono olona teny Tanjombato 3 lahy no naiditra eny Tsiafahy
Niakatra fampanoavana omaly ireo 3 lahy nosamborina noho ny raharaha vono olona nitranga teny Tanjombato ny 3 aogositra teo.
Tsy misy izay tsy mitaraina manoloana ny tsy fandriampahalemana misy eto Madagasikara amin`izao fotoana izao. Rafitra maro no manana andraikitra amin`izany fa anisan`ny tena olana dia ny olona, hoy Gerard Noel Ramamimampionona,
Tsy fandriampahalemana Tovolahy avy nijery baolina maty nisy namono
Mihamahazo vahana hatrany ny vono olona eto amintsika. Tsy eto an-drenivohitra ihany fa hatrany amin’ny faritra mihitsy izay mampanontany tena ny maro.
Mpivady niharan’ny fitsaram-bahoaka Matin’ny daroka ilay lehilahy
Ny sabotsy maraina teo dia mpivady avy nangalatra nivarotra ireo entana avy nangalariny tratran’ny fokonolona no niharan’ny fitsaram-bahoaka tao Ambalamanasy,
Tsy misy hiainana mihitsy ny tantsaha any ambanivohitra fa raha tsy mifandona amin’ny dahalo dia miady amin’ny mpijinja vary an-tanimbary ihany koa. Velon-taraina mantsy ny tantsaha amin’iny lemaka Ambohibary sy Mandrosohasina iny fa tsy mandry an-tanàna mihitsy ny vatan-dehilahy amin’ny alina fa miandry vary eny an-tanimbary indray izao.
Efa manomboka hojinjaina mantsy ny vary any an-toerana satria tsy mbola tena fararano tanteraka, ka izay tsy miambina dia ny mpangalatra no tonga aloha. Efa maro no lasibatra raha ny tatitra avy tany an-toerana ary mbola mitohy izany. Tsy tena jinjaina toy ireny fanaon’ny tantsaha ireny moa no ataon’ny mpangalatra, hoy ny loharanom-baovao fa laingosany, izany hoe ilay salohim-bary avy hatrany no jinjain’ireo mpangalatra. Tsy hitan’ny olona intsony izay hitarainana satria efa ho lava sy maro ny karazana tsy fandriampahalemana any ambanivohitra ka dia ny miambina sisa no azo atao ary mitatitra ny zava-misy fotsiny.